Nsụgharị Asụsụ Mere Mfe: Otu awa Nsụgharị | Martech Zone
Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ anyị ajụla ma anyị amatala ezigbo ọrụ ntụgharị asụsụ na ntanetị. Anyị bụ ndị mmekọ Nsụgharị Otu Oge, Intanet onye na-eduzi ọrụ nsụgharị ọkachamara. Ọ bụ otu obodo karịrị 10,000 ndị ntụgharị ntụgharị ọrụ zuru ụwa ọnụ na-eme ntụgharị asụsụ site na iji weebụsaịtị webụsaịtị nke Otu Hour, ma ọ bụ ọrụ ntụgharị email ha.
Itinye n'ọrụ na Nsụgharị Otu Oge igwe ojii ma ọ bụ API ntụgharị asụsụ ha, ndị ahịa nwere ike irite uru site na ọnụego ntụgharị belata site na itinye uche na ndị ntụgharị ụlọ dị oke ọnụ na ọrụ ndị dị elu, ma nweta ọrụ ntụgharị ngwa ngwa 24/7. Otu Hour Translation nwere ike igbunye ndị ntụgharị na-eji ebe nchekwa ntụgharị, Trados ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ, ma na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ ntụgharị asụsụ.
Otu Hour Translation nwekwara onyinye pụrụ iche maka ndị ọrụ ntughari.
Tags: ChinafrenchGermanntụgharị asụsụnyochaspanishtranslation
Ihe ngosi Lightwurx
Aug 1, 2013 na 3:38 PM
Nke a ọ bụ ezigbo iwu? Nke ahụ dị oke egwu!